Myanmar Free For All — MYSTERY ZILLION
Myanmar Free For All
စိတ်ထဲ မွန်းကြပ် နေတဲ့အခါ လုပ်ချင်တာတွေကို ထွက်ပေါက် အနေနဲ့ လုပ်တတ်ကြပါတယ် ...
www.myanmarffa.ning.com (Myanmar Free For All)
Ning မှာ Create လုပ်ထားတဲ့ ဒီဆိုက်ကလေးမှာ လုပ်ချင်တာလေးတွေ လုပ်လို့ ရပါတယ် ...
သူငယ်ချင်းတို့လည်း လုပ်ချင်တာလေးတွေ ၀င်လုပ်ကြပါ ...
ကျွန်တော်ကတော့ Youtube & Metacafe က ကောင်းတဲ့ Movie လေးတွေကို တင်ပေးနေပါတယ် ...
Youtube & Meatacafe ဆိုက်တွေမှာ သွားကြည့်လို မရရင် .. အဆင်မပြေရင် .. ရှာနေရတာအလုပ်ရှုပ်တယ်ဆိုရင် .. ခဏတာ လာလည်ရင်း ကြည့်လို့ ရပါတယ် ... :6:
ေ၀့ singup တော့လုပ်ပီးဟေ့ video တွေ download ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟ
အနော်လဲ ning မှာ တစ်ခုလုပ်လိုက်ပီ အစကတည်းက blog ဆိုအကုန်ကြိုက်ဆိုတော့....
ning မှာ မြန်မာလိုရေးမရဘူးဟ ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူး
လာကြည့် ကြည့်ပါအုံး အမှားပါလားလို့
လာလည်ပါတယ် .. ဒါပေမယ့် ဒီလို ပေါ်နေတယ် ..
This social network is still being set up!
မြန်မာလို ပေါ်ချင်ရင် CSS မှာ font:ZawGyi-One;zawgyi1 ဆိုပြီးရေးလိုက်ရင် ရပါတယ် ..
ွှToday Update (16.02.2009)
အရင်နေ့တွေက တင်ဆက်နေတဲ့ Beatbox တွေအကြောင်းကို ဒီနေ့ တော့ နားထားအုံးမယ်ဗျာ ...
Beatbox မကြိုက်တဲ့ သူတွေပျင်းနေမှာဆိုးလို့ပါ ... ( Beatbox ကောင်းကောင်းတွေ အများကြီး ကျန်သေးတယ်)
ဒီနေ့အတွက်တော့ ထူးထူးခြားခြားအစီအစဉ်လေး အဖြစ် Face Dace တွေအကြောင်းကို တင်ဆက်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ... Face Dance ဆိုတာကတော့ မျက်နှာ အမူအရာ မျက်နှာရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တွေနဲ့ ကပြ ဖျော်ဖြေတာပါပဲ ... အကောင်းတက အကောင်းဆုံး Movie တွေကို တင်ဆက်ထားပါတယ် ...
အကောင်းဆုံး Face Dance ပါပဲ ...
ဂျပန်က Face Dancer နှစ်ယောက်ပါ ... တီးလုံးတွေနဲ့ တကယ်ကို ကြည့်ကောင်းပါတယ် ...
ဒီကောင်မလေးလို မျက်နှာကို လုပ်နိုင်ဖို့က တကယ်ကို မလွယ်တာ သေချာတယ် ...
အားကစားပြိုင်ပွဲတွေက မျက်နှာ အမူအရာလေးတွေ ...
Beatbox သမားတွေစိတ်ဆိုးနေမှာ စိုးလို့ ... ဒီကောင်လေး အကြောင်းနောက်မှ ပြောပြမယ် ... အမြည်းအနေနဲ့ ကြည့်ထားလိုက် ... ကျန်တာတွေ ဆက်လာမယ် ...
Super Sunday အတွက်တော့ မနေ့က ပြောခဲ့တဲ့ Beatbox အကြောင်းကိုပဲ ဆက်ပါမယ် ...
Pop ဂီတတွေအအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင် Micheal Jackson ကိုချန်လို့ မရသလို Beatbox အကြောင်းတွေ ပြောမယ်ဆိုရင်လည်း Micheal Jackson အကြောင်းကို မပြောလို့ကို မရပါဘူး ...
Super Sunday အတွက်တော့ Micheal Jackson ရဲ အကောင်းဆုံး Beatbox တွေ နဲ့ Funny Movie လေးတွေတင််ဆက်ပေးထားပါတယ် ...
မိုက်ကယ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး Beatbox နှစ်ခုပါ ...
မနေ့ကတင်ပေးထားတဲ့ World's Best Beatbox နဲ့ Micheal Jackson ကို ဖြတ်ညှပ်ကပ် ...
Micheal Jack ရဲ့ Beatbox Remix နဲ့ ၁၂ စက္ကန့် Beatbox လေးပါ ...
အိမ်သာကထွက်တော့ အစည်းအေ၀းခန်းထဲ ဘယ်လိုရောက်နေပါလိမ့်
ကားကောင်းကောင်း ရှိတဲ့သူတွေကို ဒီလို နောက်ရမယ်
ဒီမှန်ကို ဖြုတ်ထာစရာလား ? တော်တော်နောက်တဲ့လူ